Gịnị Bụ Plastic Ọgwụ na ịkpụzi? Plastic injection ịkpụzi bụ a Usoro e ji mee ka mmetụta plastic ke ụdị ihe ị na-aiming na-emepụta. N'oge injection ịkpụzi usoro, thermoplastic Polymers na-agbara n'ime a ebu oghere. Iji mee nke a, pellets nke a ihe onwunwe na-ewe iwe otú ahụ ...GỤKWUO »
Gịnị Bụ The CNC machining Brass Parts? Brass machining akụkụ nwere ọtụtụ isi uru tụnyere machining ngwaọrụ ndị ọzọ. Brass tụgharịa akụkụ na mmiri bụ inogide, na-eri-oru oma, na ọbụna ike a tighter akara oyiyi akwa. Ke adianade do, ọla machining, na-esikwa n'akụkụ nwere a elu ...GỤKWUO »
Progressive Stampings Progressive stamping bụ a metalworking usoro na ike ruru punching, coining, ekwe na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ nke modifying metal akụrụngwa, jikọtara na akpaka nri usoro. The nri usoro agabiga a warara nke metal (dị ka ọ unrolls si a eriri igwe) site niile ...GỤKWUO »
Gịnị mere na ebe iji plastic injection Ebu A plastic injection ebu bụ ọ bụla ngwá ọrụ mere na dum ma ọ bụ akụkụ nke a plastik ihe onwunwe (ewepu ulo oru thermosetting laminates), na nke na-plastic na-eme n'ụzọ na mmekọ nke ngwá ọrụ. Ndị dị otú ahụ ngwaọrụ mbio niile si thos ...GỤKWUO »